END015 - I-OMG Industrial Borescope / Endoscope 5.5mm, 4.3inch Screen, 2800mAh Battery Semi-Rigid Tube (5m / 10m) - Izixazululo ze-OMG
END015 - I-OMG Industrial Borescope / Endoscope 5.5mm, 4.3inch Screen, 2800mAh Battery Semi-Rigid Tube (5m / 10m)
Isikrini se-4.3inch HD: Ikhamera yokuhlola isikrini ye-4.3inch LCD, inika amandla ukubukwa kwevidiyo bukhoma nezithombe ngaso leso sikhathi. Akukho ukufakwa kwe-APP okudingekayo.
I-16.5ft semi-rigid tube yinde ngokwaneleyo ukubamba ijamo lokuhlola okuningi.
Ikhamera ye-Slim 5.5mm: Inhlolokhono ye-5.5mm (0.21 inch) ifinyelela ukufinyelela kunoma iyiphi indawo ebekelwe, enjini yedizili, izimbobo zamapayipi, injini yemoto, isilinda, indle njll.
Ibhethri Elikhulu Lokwenza kabusha: Yakhelwe ibhethri le-lithium elakhiwe nge-2800mAh nge-super umthamo, ikhamera yokuhlola i-NIDAGE endoscope inganikela amahora angama-3-4 wesikhathi sokusebenza esiqhubekayo.
Amathuluzi Okuhlola Ahlukahlukene Ikhamera ye-microscope ilungele ukuhlolwa kwe-havc, ipayipi lokungena, imishini yokusebenza, injini, izimoto, isikebhe, ukuhlolwa kwendiza. Le-endoscope ye-usb ayenzelwe ukuthi ihlolwe ngokwezokwelashwa noma komuntu.
Iphakheji ifakiwe: Amakhamera we-endoscope yezimboni, i-Micro-USB Cable, Manual Yomsebenzisi, Izesekeli ze-hook, uzibuthe kanye nesibuko saseceleni sokuthatha i-angle ebanzi yokubuka, i-4.3inch Endoscope Monitor, i-8GB TF Card, i-Carrying Bag.
Izici Ezikhethekile: Waterproof / Weatherproof
Qapha: Isikrini se-4.3inch Colour LCD
Khombisa: I-500cd / ㎡
Ukuthwebula Izithombe: 1920 × 1080,1280 × 720,
Ukujikeleza: Ukujikeleza kwe-360 ° Mirroring
Sondeza: Ukusondeza kwe-3x Digital
ububanzi: I-5.5mm (0.216inch)
Ubude bekhamera: 3.5M / 5M
I-Angle yokubuka: 60 °
Ukujula kwensimu: I-3 ~ 10cm
Ukubuka okuphelele kwe-6502 Ukubuka kwe-1 Namuhla